China hot simbi intsimbi kwalenza ngentambo mveliso kunye nabenzi | Bangyi
Umphezulu wentambo yentsimbi kwalenza iqulathe iintlobo ezimbini: hot-dip kwalenza kunye electro-kwalenza. Uhlobo olushushu lwediphu eshushu lushushu kukudambisa umhlwa kunye nokusebenza okungahambisani nomhlwa kunokuba kusetyenziswe i-electro-galvanizing.
Umphezulu wentambo yentsimbi kwalenza iqulathe iintlobo ezimbini: hot-dip kwalenza kunye electro-kwalenza. Uhlobo olushushu lwediphu eshushu lushushu kukudambisa umhlwa kunye nokusebenza okungahambisani nomhlwa kunokuba kusetyenziswe i-electro-galvanizing. Ixabiso lentambo eshushu yentsimbi esisangqa iphezulu kuneyentsimbi eyenziwe ngesinyithi.
Abathengi abawusebenzisayo ngaphandle kwaye baneemfuno zomsebenzi wokulwa nerusi bayacetyiswa ukuba bakhethe ngentambo eshushu yentsimbi.
Inkqubo yemveliso iquka ukuzoba ngocingo, ukuxinga kunye nokuvala. Umzobo wocingo kukuzoba intonga yentsimbi eshinyeneyo yenze ucingo olucekeceke. Ukuxinana kukudibanisa intambo ibe yimicu, kwaye ukuvala kukuphinda wenze imisonto ibe yintambo. Emva kokuba ezi nkqubo zigqityiweyo, ziya kuvavanywa umgangatho, zipakishwe, kwaye ekugqibeleni zibe yimveliso yokugqibela.
Igama lemveliso Hot-nkxu intsimbi kwalenza ngentambo
Ibakala lensimbi 45 # / 55 # / 60 # / 70 # Intsimbi yeCarbon
Umgangatho AiSi, ASTM, Din, GB, JIS, njl.
I-alloy okanye Hayi Non-ingxubevange
Igama lebrand Bangyi
Ukunyamezelana ± 3%
Inkqubo Ukuzoba, ukuSinga, ukuVala
IBakala 45 # / 50 # / 60 # / 70 # Intsimbi yeCarbon
Ukupakisha Ngokhuni Reel / coil / roll / Z2 Ukupakisha
Umphezulu Ukudibanisa okushushu
HS IKHODI 731210000
Ukusetyenziswa 1.inkunkuma elahlwayo yokuhanjiswa kwezinto, umbane, isikhongozeli, uloliwe, amasiko, ukuloba, ukuhambisa, njl. 2. Ulwelo oluphantsi koxinzelelo, amanzi, igesi, ioyile, umbhobho womgca. 3. Ngaphakathi nangaphandle ulwakhiwo lwesakhiwo. 4. Isetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo lwezinto ezinophahla
5. Guy ucingo lwezindlu zokugcina ezolimo, umnatha.
6. Intambo yomhlaba yocingo oluhamba ngentambo kwimigca yokuhambisa umbane.
7. I-Messenger strand yeefowuni kunye neendlela zeCATV.
8. I-Guy strand yeepali zokuhambisa umbane, iipali zefowuni kunye nemicrowave kunye neenqaba zerediyo.
9. Ukuqinisa umoya kwizakhiwo ezenziwe kwangaphambili.
10. Intambo yesithintelo kunye nolondolozo lomzila kaloliwe.
11. Ucingo, i-greenhouse, umbhobho womnyango, indlu eluhlaza.
Egqithileyo Intambo yocingo yentsimbi kwalenza
Okulandelayo: Intambo yentsimbi yentsimbi
Intambo yecingo ye-Electro kwalenza intsimbi, Camera Camera Intambo, Intambo yocingo yePvc engenazingcingo, China Ukwenziwa Isefu Wire Intambo, PVC Camera Isefu Steel Intambo, Intambo yocingo lwentsimbi ngesinyithi,